Semalt Inoponesa Anoshanda Kushandiswa Kwebhuku
saka kune chido chakakura chazvo. Muchikwereti chekubhadhara mune zvaunoda, mapurogiramu akawanda ekutsvaga webhuta akavakwa. Vamwe vavo vane chimwe chinhu chinoodza mwoyo runback kana chimwe.
Kutaura zvazviri, mamwe makambani akafanirwa kuedza maitiro akawanda asati agumburwa pane izvo zvakakodzera bhizinesi ravo - grey brown color bar stools. Heino chirevo kwauri. Edza Iwe Web Extractor 9. 62, iri nyore kushandisa webhusaiti yezvinyorwa software.
newebsite Extractor 9. 62, zviri nyore kutora webhusaiti yose uye kuchengetedza zvese zviri pane dambudziko rekugara. Nzvimbo dzekudzivirirwa dzinogona kushandiswa uye dzinoshandiswazve sezvo dzatove dzakachengetedzwa pamwe chete nadzo. Zvimwe zvinhu zvinonakidza zvepurogiramu zvakakurukurwa pasi apa.
Simba rekutsvaga mapeji mazana zana panguva imwechete
Chimwe chinhu chinomira ichi chiri kunze kwekushanda kwayo. Inogona kukwanisa kusvika kune zana mapeji, mapikicha, mifananidzo, uye mamwe maitiro e data pane imwe chete run. Iyo inewo kukwanisa kudhinda mafaira kubva kune dzimwe nzvimbo dzakawanda panguva imwe chete. Iwe unongoda kuverenga zvose zvaunoda ma URL.
Dzimwe nguva iwe unogona kungoda zvimwe zvikamu kubva pane zvakatemwa pamapeji. Iri shandiso richakubatsira iwe sezvo richigona kubudisa zvinyorwa zvinodiwa kubva pamapeji ewebhu. Mune mamwe mazwi, Web Extractor 9. 62 inopawo nzvimbo yakakwirira yekururama.
mazuva makumi matatu ekuedzwa
Zvechokwadi, unobvumirwa kuedza kwemazuva mamwe kuti iwe usarudze kana uchitenga kana kwete. Ichi ndicho chikonzero chinouya nemazuva makumi matatu ekuedzwa. Icharega kupindura pashure pezuva rechinomwe kunze kwekuti iwe uchitenga.
Kunoshanda nemitauro yakawanda yeWindows operating system. Inotsigira Windows Vista, 2003, 95, XP, Me, 2000, NT, uye Windows 98.
Kukura kwemudiki Kukura kwayo ndeye 662 chete. 62KB. Haisi kunyange kusvika 1 MB. Saka zvingotora chikamu chekuregererwa kwekuchengetedza nzvimbo pane dambudziko rako. Izvi zvakakosha zvikuru sezvo vanhu ikozvino vanoshandisa nzvimbo dzavo dzekuchengetedza zvakanaka. Vanosarudza zviduku zviduku. Ichi ndicho chikonzero chekuwedzera kwepurogiramu iyi. Kutsigirwa kwepeji yepamusoro Paunenge uchishandisa, unogona kupinda mune mamwe matambudziko. Ichi ndicho chikonzero purogiramu inouya ne 24/7 sangano rekusimbisa teknolojia. Iwe unogona kugara uchitsvaga rubatsiro kubva muboka rayo rutsigiro rwekambani chero nguva uye chero zuva.
Inogona kuparadzanisa zvikamu zana zvemashoko panguva imwechete
Zvinogona kuparadzira mawebhusayithi akawanda mu kumhanya kamwe
Izvo zvishoma muhukuru (662. 62KB)
Inotsigira Windows 98, NT, 2000, Me, XP, 95, 2003, uye Windows Vista
Inobatsira pakutsika kwepamusoro
Sei usingaiti kushandisa nguva yekuedzwa kwayo kuti uwane manzwiro ayo? Hazvisi zvachose, uye iwe hauna kusungirwa chero ipi zvayo yekuzvitenga mushure mekutongwa. Mune mamwe mazwi, hauna chaunorasikirwa nacho nekuda kwekuedza.